» “Waxa nalugu qasbayaa inaanu Al-shabaab noqono”Qoyska Caaqil Ibraahim Axmed
“Waxa nalugu qasbayaa inaanu Al-shabaab noqono”Qoyska Caaqil Ibraahim Axmed
Feb 20, 2013 - jawaab	Aqrisatay:4431Qoyska Caaqil Ibraahim Axmed Cabdi ayaa si weyn uga cawday tacaddi soo noqnoday oo ay ku hayaan ciidamadda Sirdoonka Somaliland.
Qoyskan oo habeen hore laga xidhay Axmed Ibraahim Axmed (Darmaan), waxaa ay tilmaameen in habeen hore ciidamada sirdoonka Somaliland ka dhex qafaasheen suuqa Hargeysa wiilkaas abaaro 7-dii fiidnimo. Islamarkaana, Jidh-dil loo geystay. Iyaddoo horena, gurrigoodda laftiisa loogu daatay qaarkoodna muddo u xidhnaayeen sabab aan illaa immika la garanayn.
Shir jaraaíd oo ay si wada jir ah u qabteen Hooyadda dhashay Axmed Ibraahim iyo guddoomiyaha Wargeyska saxafi Cabdifataax Dheeg Axmed oo ka mid ah qoyskaas ayaa waxa ay kaga hadleen tacaddi, xadgudubyo soo noqnoqday iyo cago juglaynta ciidamada sirdoonku ay ku hayaan baryahan dambe, taas oo ay sheegeen inay sii kordhaysay marba marka ka danbeysa.
Shirkan jaraaíd oo ay ugu horeyn ka hadashay Hooyo Mako Axmed Warsame waxa ay hadalkeedda ku bilowday sidan; “Muddo imika laga joogo laba bilood ayay noo soo daateen ciidanka sirdoonku anaga oo hurudna, waxaanay nagu rideen rasaas, waxaanay dhammaan jajabiyeen alaabtii guriga taalay ,waxaanay habeenkaa guriga ka kaxaysteen shan inan oo ay xidheen, ka dib waxay la hadheen inankayga oo ah Axmed Ibraahim Axmed, markaas oo uu u xidhnaa ciidamada sirdoonka muddo labaatan cisho ahayd, wax dambi ah oo ay ku heleena ma ay jirin baadhitaanadii ay sameeyeen. kadibna waa ay iska soo daayeen iyaga oo aan wax raali gelin ah aan nalaga siinin dhibaataddaas la noo gaystay”. Ayay tidhi hooyo Mako Axmed.
Iyada oo hadalkeeda sii wadana waxay intaas ku dartay oo ay tidhi. “Habeen hore abaaro sideedii fiidnimo ayaa haddana Axmed Ibraahim Axmed oo gaadhi wata suuqa dhexdiisa ay ciidamada sirdoonku ka qafaasheen kadibna ay la tageen guri qarsoodiya oo ay leeyihiin ciidamada sirdoonku sida la ii sheegayna waa ay jidh dileen oo dharkii ayay xataa khasab kaga badaleen, markaa ka dib abaaro laba iyo botankii habeenimo ayay keeneen saldhiga dhexe kuna yidhaahdeen ciidanka saldhiga dhexe hanaloo hayo meel gaar ahna ha na loogu xidhi sidoo kale, waxay amreen inaanay cidna u geli karin cidna loo sii dayn karin.”
Hooyo Mako Axmed waxa kale oo ay ka warantay xaaladiisa caafimaad oo ay sheegtay in inankeedu uu qabo xanuunka Macaanka ilaa imikana aanay xaaladda uu ku sugan yahay ka warami karin, waxaanay tidhi; “Saaka markaanu ogaanay (shalay) ee aanu saldhiga ugu tagnay ee aanu is nidhi u geeya irbadii macaanka waxa dhacday in askaritii noo diiday inaanu aragno, balse markii dambe taliyaha saldhigu uu naga qaaday irbadii oo uu isagu kusoo muday, waananu u mahadnaqaynaa taliyaha, ilaa wakhtigaana kama warami karo inuu nool yahay iyo inuu dhintay.”
Marwo Mako oo ka hadashay waxa inankeeda loo daba socdo ayaa sheegtay in lagu qasbayo inay noqdaan Al-shabaab, ciidamada sirdoonkuna doonayaan inay dalka ka baxaan “Waxay doonayaan inay nagu shaanbadeeyaan inaanu ka tirsanahay ciidamada Al-shabaab, markaa waxaan leeyahay haddii aanu nahay Al-shabaab waxba may ahaateen oo dambi aanu faraha kula jirno nalagu qabto, waxaanu samaynay oo dambiyana ma garanayno, dowladda Somalilandna namay odhan dambigaas ayaad gasheen oo laydinku haystaa. Sidaas darteed,waxaan cid kasta oo cadaaladda jecel, islamarkaana neceb dulmiga haddii ay tahay shacab iyo haddii ay masuuliyiinta dawladda ku jiraanba leenahay arrintaas in wax lanagala qabto, sababtoo ah qof kasta gurrigiisa ayay ugu soo gali doontaa haddii ay annaga maanta na haysato oo sidaas lagu eegto”
Dhanka kale guddoomiyaha Wargeyska Saxafi Mr. Cabdifataax Axmed Dheeg oo ay guri ku wada nool yihiin inanka ciidamada sirdoonku habeen hore fiidkii ka kaxaysteen suuqa magaalada Hargeysa oo isna arrintaa ka hadlay ayaa sheegay in uu isagu alaabtii wargeyska lagu daabacayay u dirtay marka la qaban doono oo uu gaadhiga uu watayna uu ahaa gaadhigiisa shakhsiga ah guddoomiye ahaan, ilaa haddana ay ka maqan yihiin gaadhigii iyo abaaltii wargeyska oo saarani, isla marakaana aanay ka warami karin meel uu gaadhigaas iyo alaabtii saarnayd ay ciidamada sirdoonku geeyeen.
Guddoomiye Cabdifataax isaga oo arrintaa ka hadlayana waxa uu yidhi; “Axmed waxa uu ila joogay Wargeyska Saxafi doraad, dabadeed saacadu markay ahayd todobadii fiidnimo ayaan u diray inuu alaabtii wargeysku ku soo baxayay kasoo iibiyo Dukaanka Golis oo iibiya galabka lagu daabaco wargeysyada qaarkood, inankii iyo gaadhigiiba waanu weynay. dabadeed waxaan ogaaday abaaro kow iyo tobankii habeenimo in ninkii alaabta aan u diray xidhan yahay, markaa ka dib waxaan tegay saldhiga dhexe oo aanu weydiinay waxa dhacay halkaas oo ciidanka saldhigu noo sheegeen in ay u keeneen ciidamada sirdoonku, isla markaana ku amreen inay meel gooni ah ugu xidhaan, gaadhigaygii iyo alaabtii wargeyskana ma hayo meel aan kaga waramana ma garanayo oo iyagga saldhiga lama geyn, markaa arrintaa waxaan u arkaa tacadi nalagula kacay oo naloo gaystay, horena waa naloogu gaystay oo waxa gurigayaga noogu soo daatay ciidamada sirdoonka, kiis nalagu qaadayna ma jirto, raali gelinna nalagama siin khaladkii nalagu sameeyay, cidda tacadigaa nagu haysaana waa inamo yaryar oo aanu garanayno mid aanu kaga hadhanayna maaha ilaa aanu sharciga la tiigsano. Balse, ujeedada aanu warkan u baahinaynaa waa in ummaddu nala ogaato dhibaataddan na haysata.” Ayuu ku soo gunaanaday hadalkiisa Guddoomiye Cabdifataax Axmed Dheeg.